ल मेरो पनि राम राज्यको शुभ आगमनमा बधाइ छ !
तपाइले भने जस्तो देश शब्दजालमा मख्ख छ, सपना र शब्दले देशका सारा प्राणीहरु रंगिएका छन् । भोलि शब्दको गणतन्त्र जस्तै शब्दका महल, शब्दका विकासहरुले देश झकिझकाउ भएर तपाई हामी मुग्लानेलाई “सपनामा” जिस्काउने छन् : “के दुख गर्छौ विदेशमा ! हेर हामी कहा जनबाद छ, रामराज्य छ, आउ!”
जे होस मारकाट, अविश्र्वास, छलकपट, गान्धीबाद, वाइ सि यल “टेजर” आदिले भरिपुर्ण रामराज्य आउने भयो ।
हो साच्चै हो हाम्रोमा शाब्दिक गणतन्त्र, शाब्दिक स्वतन्त्रता र शाब्दिक सार्बभौमिकतामा मात्रै छ, ब्यबहारमा त त्यो कहिलै हुदैन र जनताले पनि त्यो कैले देख्दैनन, सुन्छन मात्र।
अब कागताली परेर राष्ट्रपतीको नाम पनि राम नै परेछ। अनि त के मिलीहाल्यो कुरो, ब्यबहारमा रावण राज्य कागजमा राम राज्य।